February 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha February 28, 2021
(Sheffield) 28 Feb 2021. Liverpool ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Sheffield United oo ay ku booqatay garoonka Bramall Lane, kaddib markii ay kaga so adkaatay 0-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay barbardhac 0-0 ah. Qeybta labaad ee dheesha marka dib leysugu […]Sii akhriso
(London) 28 Feb 2021. Kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa barbardhac 0-0 ah ku kala baxay, kaddib ciyaar aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Stamford Bridge, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Chelsea iyo Manchester United kula nasteen barbardhac 0-0 […]Sii akhriso
(England) 28 Feb 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Sheffield United iyo Liverpool ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Sheffield United ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Liverpool si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan […]Sii akhriso
(Manchester) 28 Feb 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Chelsea iyo Manchester United ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Chelsea ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Manchester United si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan […]Sii akhriso
(England) 28 Feb 2021. Arsenal ayaa guul ay u qalantay kaga soo gaartay Leicester City garoonka King Power, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Arsenal. Daqiiqadii 7-aad kooxda Leicester […]Sii akhriso
U.S. is ‘gravely concerned’ by reports of abuses in Ethiopia – ABC27
Ethiopia News February 28, 2021
U.S. is ‘gravely concerned’ by reports of abuses in Ethiopia ABC27 Ethiopia Criticizes Amnesty Report on Massacre in Tigray Bloomberg US calls for withdrawal of Eritrean forces in Ethiopia following investigation into massacre CNN Ethiopia’s Tigray crisis: Blinken says US concerned about atrocities BBC News U.S. Sii akhriso
Ethiopia Criticizes Amnesty Report on Massacre in Tigray – Bloomberg
Ethiopia Criticizes Amnesty Report on Massacre in Tigray Bloomberg US calls for withdrawal of Eritrean forces in Ethiopia following investigation into massacre CNN U.S. is ‘gravely concerned’ by reports of abuses in Ethiopia ABC27 Ethiopia’s Tigray crisis: Blinken says US concerned about atrocities BBC News U.S. Sii akhriso
Roadside bomb kills 3 in Somali capital – Anadolu Agency
Somali News February 28, 2021
Roadside bomb kills 3 in Somali capital Anadolu AgencySii akhriso
Mogadishu(SONNA)- Prime Minister of the Federal Republic of Somalia, H.E Mohamed Hussein Roble on Sunday held a virtual meeting with representatives from International Community, SONNA reported. The virtual meeting aimed at resuming the dialogue between FGS and FMS regarding the implementation of the 17th September 2020 and the technical committee meeting in Baidoa Sii akhriso
Soomaaliya February 28, 2021
Muqdisho-(SONNA)-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Caasimadda Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Maanta shir Gudoomiyay kulan looga hadlayay dardar gelinta Wacyi galinta Coved 19 si looga Wacyi galiyo Bulshada kunool Caasimadda Muqdisho Cudurka Safmarenka ah. Kulanka ayaa Waxaa goob-joog ka ahaa Guddoomiye ku-xigeennada Maamulka Gobolka Sii akhriso